Isixhobo seKhapsule sokuXhasa iMushroom | China Abavelisi beCapsule abaXhamli baseKhaya, abaXhasi
Yazi iMushroom yamayeza
Yintoni Amakhowa oNyango
Isibonelelo seMushroom yamayeza
Isongezo seKhowa seCapsule
Ikofu yangoko nangoko
Iimveliso eziKhethekileyo zoMsebenzi
Indoda yamandla ikofu
Sinexabiso elifanelekileyo kwiimveliso ezisemgangathweni ezifanayo. Ukuqinisekisa umgangatho kwaye ikunike inzuzo engaphezulu. Kubasasazi bethu, sinamaxabiso awodwa.
Ukukhupha i-Reishi polysaccharides
I-Lion's Mane ikhuphe
I-Organic Ganoderma iqokobhe-bhuti ...
I-REISHI CAPPUCCINO IKHOFI
Ioyile yeGanoderma Spore Ioyile ...
I-Agaricus Blazei Capsules njenge-Booster 90 Iipilisi zeVeggie
Imisebenzi: I-Agaricus Blazei-Murrill (Agaricus Blazei) siswiti esimnandi, esinezondlo, amakhowa atyiwayo anezimbiwa, imicu, iivithamini kunye neeamino acid. Abomdabu eBrazil, ngoku kulinywa ngokubanzi kwaye kuphandwa eJapan ngeempawu zayo ezikhuthaza impilo. Ukwenziwa kweprotein kubandakanya iintlobo ezili-18 zeamino acid. Iindidi ezi-8 zomzimba zee-amino acid ezifanelekileyo zigqibelele. Iqulethe ngeendlela ezahlukeneyo.
Iipilisi ze-Oyster njengezingxobo zeNkqubo yokuKhusela iiPilisi zeVeggie ezingama-90
Imisebenzi: Amakhowa eOyster (Pleurotus ostreatus) akhula ngokwendalo kwihlabathi liphela emahlathini, abizwa ngokuba yimilo kunye nombala. Ngama-mushroom alinywa ngokulula nathe aba kukutya okuthandwayo e-Asiya, eYurophu nakuMntla Melika. lt imnandi kakhulu kwaye inikezela ngeepropathi ezahlukeneyo zokunika impilo kunye nezibonelelo.
Iipilisi zeMaitake Immune System Booster 90 Iipilisi zeVeggie
• IMaitake (iGrifola frondosa) yipolypore mushroom ekhula ngokwamaqela asezantsi emithini, ngakumbi i-oki. I-mushroom yaziwa ngokubanzi phakathi kwezithethi zesiNgesi njenge-hen of the woods, hen-of-the-woods, intloko yenkunzi yegusha, nentloko yegusha. Ixabiso lesondlo liphezulu kakhulu. Umzimba utyebile kwiiamino acid, iivithamini kunye neeminerals. Incasa yayo imnandi.)
• I-Maitake isetyenziselwa inqanaba le-cholesterol esempilweni, uxinzelelo lwegazi oluqhelekileyo kunye nokuxhasa isibindi.
Iicapsules ze-Organic Shiitake
Imisebenzi: I-shiitake yikhowa edliwayo eyinzalelwane eseMpuma Asia, nelinywayo ityiwe kumazwe amaninzi aseAsia. Kwiipropathi ezahlukeneyo zokunyusa impilo eziye zafunyanwa kwiinkulungwane zamayeza amandulo, kuthathwa njengekhowa lokunyanga kwezinye iindlela zamayeza emveli.
Oyster Oyster yeKhowa yeeKhowusi zeKhowe
Imisebenzi:Amakhowa eOyster (Pleurotus ostreatus) akhula ngokwendalo kwihlabathi liphela emahlathini, abizwa ngokuba yimilo kunye nombala. Ngama-mushroom alinywa ngokulula nathe aba kukutya okuthandwayo e-Asiya, eYurophu nakuMntla Melika. lt imnandi kakhulu kwaye inikezela ngeepropathi ezahlukeneyo zokunika impilo kunye nezibonelelo.
I-organic yeTurkey yeTaps njengeCapsule
Imisebenzi: Umsila weTurkey, okwabizwa ngokuba yiCoriolus Versicolor, likhowa eliqhelekileyo le-polypore elifumaneka kwihlabathi liphela. Ubume bayo kunye nemibala emininzi iyafana neye turkey yasendle, iVersicolor ibizwa ngokuba ngumsila we-turkey, yaziwa kakhulu ukukhuthaza ukusebenza komzimba kunye nokunciphisa ukudumba.
Iicomputer ze-Organic Agaricus Blazei
Iicapsules ze-Organic maitake zokuSusa
I-Organic Cordyceps militaris Iicapsule zokukhupha
• IiCordyceps zifunyanwa zizinambuzane ezikhulayo ngokungeyonyani kwiCordyceps militaris. I-adaptogen yendalo yemvelo enceda umzimba ukuba uvumelane noxinzelelo. Ifumana ukungaziwa ngenxa yesakhono sayo sokunceda ukuphucula amandla, unyamezelo, kunye nokuzilolonga uqeqesho. Umxholo ophambili une-cordycepin, i-cordycepic acid, kunye ne-cordyceps polysaccharides, enexabiso eliphezulu kakhulu kwezonyango.
• ICordyceps luhlobo lwamakhowa amayeza ekuthiwa anika izibonelelo ze-antioxidant kunye ne-anti-inflammatory. Kudala isetyenziswa kunyango lwesiTshayina, ii-cordyceps ziyafumaneka e-United States njengesongezo sokutya.
Wuling (Fuzhou) iBiotechnology Co., Ltd.
© Copyright - 2003-2021: Onke amalungelo agciniwe.